:: My Little World ::: Mandalay Myanmar Cusine (SG)
Posted by Nay Nay Naing at 10/31/2008 09:28:00 PM
clementi မှာ မြန်မာဆိုင် ၂ဆိုင်တောင် ရှိပြီ။ ဟိုတလောလေးကမှ ကံကောင်းဆိုတာ ဖွင့်သွားသေးတယ်။ 325 မှာ
Friday, October 31, 2008 11:30:00 PM
ဒီတပတ်တော့ breakfast တနပ်စာအိုကေသွားပြီ။
Saturday, November 01, 2008 12:46:00 AM
ဆိုင်ဖွင့်ပွဲက ဘယ်သူလာစားစားရလား ငှင်....
ဟာ၊ ၂ ရက်နေ့ မနက် ၁၁ နာရီ ၄၄ မိနစ်တိတိမှာမှ ဖတ်မိတယ်လို့... သွားပြီကွာ..
Sunday, November 02, 2008 11:45:00 AM
မမေ >> ဟုတ်လားမမေ။Clementi မှာက မြန်မာတွေ နေတာများလို့ဆိုင်တွေ အပြိုင်အဆိုင် ဖွင့်ကြတာ ထင်တယ်။
တက်တူ >> သွားစားဖြစ်လား။ မုန့် ဟင်းခါးက စားလို့ ကောင်းလား။
sin dan lar >> ဒီက မြန်မာ ဆိုင်တွေမှာ ဆိုင်ဖွင့်ပွဲတွေဆို ဘယ်သူလာစားစား ကျွေးကြတာများတယ်။ သူတို့ချက်ထားတာတွေ မကုန်ခင်အထိပေါ့။
TZA>> အခွင့်အရေးကြီးတစ်ခု လက်လွတ်သွားရတာပေါ့..
ဒါနဲ့ကို TZAက ..တနင်္ဂနွေနေ့ မှာ အစောကြီးနိုးနေတာပဲ။ ကျွန်မဆို တနင်္ဂနွေက နေ့ လယ် ၁ ချက် ထိုးခါနီးမှ နိုးတယ်။
မ Nay ရေ... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
I will drop by foratry on မန္တလေး cuisine :)
ကို Alvin >> ဒီမှာရေးထားတာကို ဖတ်ပြီး အဲဒီမှာ သွားဝယ်ဖြစ်လို့လိုချင်တာလေးတွေ အဆင်ပြေပြေ ၀ယ်လိုရခဲ့တယ်ဆို သတင်းပေးတဲ့ ပိုစ့်ရေးရတာ တန်သွားပါပြီ..
Tuesday, November 11, 2008 9:59:00 AM
မ Nay ရေ... haha, that's too difficult for me to read... I'll probably take more than an hour searching the dictionary for each word.
I'm non-burmese... and my burmese language is still very much like baby-talk. I will copy-and-paste your message and then check my မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် အဘိဓာန် (Myanmar-English Dictionary) when I'm free later.
Learning from all of you :) Thanks again!
Saturday, November 15, 2008 7:22:00 PM